TOKO 38 - 41:
Tafalatsaka lalina tao am-pon’ i Joba , ny fisalasalana ny amin’ Andriamanitra . Amin’ ny ankapobeny , dia mba ilain’ny olombelona ihany ny “Fisalasalana” , satria amin’ izany no hahatonga an’ i Joba tsy hanan-kianteherana intsony . Eo indrindra mantsy no fotoana hahatsiarovany an’ Andria-manitra . Nampahafantatra an’ i Joba ary Andriamanitra fa eo anilany sady tena akaiky azy Izy . Tsy lavitra velively araka ny fihevitr’ olombelona azy alory Andriamanitra . Ny fisalasalana tao amin’ i Joba ny amin’ Andriamanitra , dia nahafantarany , fa :
· “Ilay nampijaly azy ihany no hitokisany amin’ ny farany” .
· “Ilay Andriamanitra tamin’ ny lasa ihany , no mbola Andriamanitra koa rahampitso” .
Tsapan’ i Joba tsara ary , fa toy ny aloka ihany Andriamanitra namely azy . Toa hitany izany Andriamanitra naneso azy , ka :
· Toy ny Tsitoha no fiheverany an’ Andriamanitra , eo anatrehan’ ny olona toy ny ahitra .
· Mampiseho zava-mahagaga sy fahendrena amin’ ny zava-boahary noforonin’ ny tenany Izy .
Ny tena fantatra , dia tsy voalaza eo amin’ ny Tantara , ny amin’ Andriamanitra manazava amin’ i Joba ny antony mahatonga Azy hitsara . Raha mbola tao anatin’ ny fahoriana lalina i Joba , dia tsy nihambahamba akory nilaza fa misy tsy rariny teo amin’ ny fitondran’ Andriamanitra . Ny naha-tonga azy hilaza izany , dia ny fahatsapana anaty sy fiaretany ny fangirifiriana sy fahoriana , ary indrindra ny toe-javatra nitranga taminy , izay nitarika azy hanao safo-be-mantsina ny amin’ ny zava-nisy rehetra , noheveriny ho nataon’ Andriamanitra taminy .
Ny fandresen-dahatra natao an’ i Joba , dia tsy nataon’ Andriamanitra tahaka ny azy telo lahy, fa nataon’ Andriamanitra kosa izay hahatonga azy hahatsiaro tena , satria tena tery saina izy amin’ ny maha-olombelona azy . Noho izany , dia tsy nahita afa-tsy lalan-tokana izy , dia ny “Fanomezany tsinyan’ Andriamanitra” . Miseho amin’ ny maha-Andriamanitra Mpamorona izao tontolo izao Azy anefa Andriamanitra , sady tena mahalala tsara izao tontolo izao noforoniny . Araka izany , dia Izy irery ihany no hàny afaka hilaza na tsara na ratsy ny fitondrana ataony amin’ ny voahariny rehetra . Tsy fanomezan-tsiny an’ i Joba izao mahazo azy izao , fa fanomezana lesona ho azy kosa .
Misy foto-kevi-dehibe telo hita amin’ io valin-tenin’ Andriamanitra io :
Foto-kevitra Voalohany :
· Ny olombelona dia tery saina , fa izao tontolo izao kosa dia malalaka noho ny sain’ olombelona .
· Andriamanitra ihany no mahalala tsara izao tontolo izao , ary hita eo amin’ ny fitondrany izany .
· Izy ihany koa no afaka mitsara ny tenany , sns…sns…
Ny nanaovan’ Andriamanitra izany rehetra izany , dia lalana handreseny lahatra an’ i Joba .
Raha eken’ i Joba fa mahery sy Hendry Andriamanitra , dia moa ve tsy misy izay asan’ Andriamanitra tsy ho takatry ny sain’ olombelona na oviana na oviana ? Na miezaka azan y olona , dia misy fetrany ihany ny fisainany . Andriamanitra no mamelatra eo anatrehan’ i Joba ny zava-boahariny . Ny tian’ Andriamanitra ho tafalatsaka tsara ao an-tsain’ i Joba dia izao : ny zava-boahary dia nataoo hahazoan’ ny olona mahatakatra fa mikarakara sy tia ny zava-boahariny Andriamanitra . Lasa ho mpihevi-tena ho manana ny maha-izy azy mantsy ny olombelona ka sahy milaza fa izy ihany no hàny zava-boahary , na hàny nataon’ Andriamanitra . Tokony hanetry tena tanteraka anefa ny olona , satria kely sy bitika eo anatrehan’ ny zava-boaharin’ Andriamanitra izy .
Foto-kevitra Faharoa :
Rehefa avy nahatsiaro tena Joba , dia tokony hahatsapa fa :
·Tsy anjarany ny misalovana amin’ izao fomba itondran’ Andriamanitra ny zava-boahary izao.
·Tsy anjaran’ ny olona ny hanoro an’ Andriamanitra eo amin’ izay tokony hataony .
Izany sy ny toy izany indrindra , no mahasarotra ity Boky ity , satria tsy mora ny valiny ilaina.
Andriamanitra no nangatahin’ i Joba mba hitondra fahamarinana ho azy . Tsy nahoan’ Andriamanitra anefa izany hataka nataony izany . Maro ny zava-boaharin’ Andriamanitra manodidna azy . Nataon’ Andriamanitra ireny mba hahatsapan’ ny olona ny fikarakarany sy ny fitiavany ny zava-boahary monontolo .
Foto-kevitra Fahatelo :
Nirin’ i Joba ny hifandahatra amin’ Andriamanitra . Io tantaran’ i Joba io no mampiseho ny tantaran’ ny olombelona rehetra sy ny toetrany . Hitantsika eto, fa Andriamanitra dia tsy nanome an’ i
Joba mihitsy ny valin’ ny fanontaniany . Ka dia hitantsika amin’ izany , fa mipetraka mandrakariva ny “Probleman’ ny fijaliana mandrakankehitriny”.